Ebee ka ịzụta SARM raw ntụ ntụ na ọnụ ahịa siri ike? | AASraw Fat Loss
SARM kachasị eji eme ihe: Ebee ka ịzụta SARM raw ntụ ntụ na ọnụ ahịa siri ike?
/blog/abụba ọnwụ/SARM kachasị eji eme ihe: Ebee ka ịzụta SARM raw ntụ ntụ na ọnụ ahịa siri ike?
Ihe na 12 / 29 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na abụba ọnwụ.
Ọ BỤRỤ na ịchọrọ ịmara ỌZỌ EBE, HỤNÚ Ha NA-ECHI NA NJE NA NJỌ NDỊ NTỌ NDỊ, I NWERE ỊGỤGỤ ISIOKWU A.
1.SARM raw ntụ ntụ 2.
3.MK-677 / Ibutamoren 4.Dosage nke Mk-677 Ibutamoren
5.RAD140 / Testolone 6. Ọgwụgwụ nke Testolone (RAD140) Ntụ ntụ
7.MK 2866 / Ostarine 8.Dosage Of Ostarine (MK-2866) Ntụ ntụ ntụ
9.LGD-4033 / VK5211, Ligandrol 10.Dosage nke LGD-4033 (Ligandrol)
11.GW 501516 / Cardarine 12.Dosage Nke GW 501516 (Cardarine)
13. Ebe ịzụta SARM raw ntụ ntụ na ọnụahịa siri ike?
|. GW501516 (Cardarine) isi Characters:
1.SARM raw ntụ ntụ
SARM na-anọchite anya modulator androgen receptor modulator, na ọ bụ ụdị ọgwụ ọjọọ yiri nke ndị na-arịa ọrịa anabolic.
E mepụtara SARM maka ndị nwere ọrịa dị ka akwara mgbu, osteoporosis, anaemia, na ike ọgwụgwụ.
E bu n'uche ka ha bụrụ ihe nrịanrị dị mma karịa ọgwụgwọ nke ọgwụ na-anọchite anya testosterone. Ma ha ga-emezuzu ọhụụ a ka a ga-ekpebisi ike.
Ugbu a, bodybuilders na-ewere SARM maka otu n'ime ihe abụọ kpatara:
(1) Iji "mee ka ụkwụ ha sie ike" site na iji ọgwụ ọjọọ anabolic tupu ịbanye n'ime usoro ọgwụ steroid.
(2) Iji mee ka usoro steroid dị irè ghara ịdị irè na-enweghị mmetụta dị egwu ma ọ bụ nsogbu ahụ ike.
Ọtụtụ bodybuilders kwenyere na SARM na-enye aka karịsịa maka igbutu n'ihi na ha na-enyere aka na-ejide ya ma ọ dị ka ọ na-eme ka njigide mmiri dịkwuo elu.
Nchọpụta, nyocha na-egosi na SARM adịghị ike maka ụlọ muscle dịka steroid ndị omenala, mana ha na-arụ ọrụ karia ihe okike ọ bụla ị ga - ewere (dika creatine).Ha na-ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu n'ihi na ọ na-esiri ha ike ịchọpụta na ọgwụ ọgwụ. Ugbu a, ọ bụrụ na ihe niile m kwuru dị ugbu a ịchọrọ ịgbaga Google, obere akpa n'aka, ọ bụghị ngwa ngwa ... anyị emebeghị.
Enwere SARM ole na ole n'ahịa, ụfọdụ na-esikwu ike ma nwee nsogbu dị elu karịa mmetụta ndị ọzọ.
Ndị na-ewu ewu bụ:
Mk-677 ibutamoren bụ ụdị ọgwụ nke nwere ike inyere gị aka imeziwanye ọnọdụ gị, ike nke ọkpụkpụ, ahụike na ụbọchị gị n'ụwa a. Ngwaahịa ahụ na-arụ ọrụ site n'ịkwalite uto nke hormone dị mkpa na insulin dịka ihe na-akpata 1, nke a makwaara dịka IGF-1. Ọ na-akwalitekwa uto nke arụ ọrụ IGFBP-3.
MK-677 nwere 5 isi uru, nke bụ:
Nwee udi nkuzi
Na-egbochi Ọganihu Tumo
Ndị na-eme egwuregwu, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-azụ ọzụzụ ike na-achọkarị ụzọ ndị pụrụ inyere ha aka meziwanye ọrụ ha ma nweta uru ahụ. N'ezie, e nwere ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche nke nwere ike inyere gị aka imezu ihe ọ bụla ịchọrọ, ma ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a nwere mmetụta ndị ị na-achọghị ịbụ akụkụ nke.
Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị ọzọ kachasị emetụta gụnyere ọbara mgbali elu, nkwụsịtụ omume, enweghị nkwarụ na ọtụtụ nsogbu ndị metụtara ahụike ọzọ. Ochioma diri gi, Mk-677 ibutamoren anwalele ma gosi na o di mma maka ahuhu na oru ozo ndi ozo. Jide n'aka na ịlele nyocha anyị na nyocha ndị ọzọ SARMS Ligandrol na Ostarine, nke na-enyekwa nnukwu utịp.
4.Dosage nke Mk-677 Ibutamoren
Dị ka ọtụtụ nnyocha si kwuo, MK-677 Ibutamoren doses nke dị n'agbata ise milligrams na iri abụọ na ise milligrams (5-25mgs) kwa ụbọchị egosipụtawo nnukwu ihe. Enwere mmadụ ole na ole bụ ndị gosipụtara nnukwu nsonaazụ ndị dị elu, ma 5-25 mgs bụ ihe akwadoro. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, ọ bụ ihe dị mma ị ga-amalite na ịmị mkpụrụ nke ise milligrams.
Testolone (RAD140) bụ ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ n'ime ezinụlọ nke ndị na-emepụta modulu na-emepụta androgens, ma ọ bụ dị ka amara ha - SARMS. Ya mere, ya kachasị uru n'elu anabolic steroid bụ na ọ na-enye nsonaazụ dị mma yiri nke ahụ, na enweghi mmetụta ọbụla ọ bụla. N'ezie, nke a bụ ihe dị iche iche pụrụ iche, ọbụna mgbe eji ya tụnyere SARMS ndị ọzọ.
Na nnyocha ndị metụtara RAD140, nke a makwaara dị ka Testolone, a na-enyocha ọtụtụ n'ime ụmụ oke na oke. Otú ọ dị, ihe ọmụmụ ndị a gosiri na ọ bụ ezigbo nkwa. Dịka ọmụmaatụ, a gosipụtara na RAD140 nwere ihe pụrụ iche nke igbochi prostate-amụba nke testosterone kpatara, nke na-eme ka ọ bụrụ ntụpọ zuru okè nke steroid nke nwere ike ịkpata mmetụta a na-adịghị mma.
Ọzọkwa, mgbe a na - enye Testolone na enwe, enwere ọganihu dị ukwuu na ụkọ anụ ahụ n'oge oge nchịkwa. Ọganihu a na-adabere na ụda na-adabere na ya, ya mere site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, e nwere mmụba ọzọ a na-akpọwanye na ntanye na ụkọ abụba. N'ihi ya, testolone bụ ezigbo SARM na ihe niile a na-atụ anya ya site na ụdị ndị a - nchekwa na irè.
6.Dosage Of Testolone (RAD140) Ntụ ntụ ntụ
Ntughari RAD140 a na-atụ aro si na 20 gaa na 30 milligrams (mgs) kwa ụbọchị, oge kachasị mma bụ oge 12-14.
Dị ka ọgwụ na-eme nnyocha, RAD140 kwesịrị ịbata n'ụdị mmiri ka ewere ọnụ. Ọ dị mkpa idobe mmiri ahụ n'ime ọnụ, dịka ọ ga-arapara na mgbidi nke iko ma ọ bụrụ na ejikọta ya na liquids. Mgbe ịtinye ya n'ọnụ, ị nwere ike iji mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi zoo ya. N'ihi ndụ ndụ dị ogologo, RAD140 nwere ike ịzụta otu ugboro kwa ụbọchị, ọ dịghịkwa mkpa iji ya ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị.
Enochbosarm, nke a maara nke ọma dịka Ostarine ma ọ bụ MK 2866, bụ Onye Na-ahụ Maka Androgen Receptor Modulator (SARM) nke GTx (GTx-024) mepụtara iji merie ahụ ike na osteoporosis. Ọtụtụ ndị na-ekwupụta Ostarine nwere ike ịchọpụta iji atụmatụ ọgwụgwọ na-agbanwe ihe na hormone, yana ọgwụgwọ sarcopenia, cachexia na muscle atrophy. Nke a bụ abamuru dị oké ọnụ ahịa nye ndị na-arịa ọrịa ahụ na-egbusi ahụ ike, dịkwuo karịa n'ihi na egosila na SARM adịghị emetụta ọkpụkpụ anụ ahụ na-adịghị ahụkebe.
Ostarine, nke a makwaara dị ka MK-2866 bụ SARM (nchịkwa nchịkwa androgen receptor) nke GTx kere iji zere ma mee ka ọkpụkpụ ahụ kwụsị. Ọ ga - emesị bụrụ ọgwụgwọ maka ịzere atrophy (mkpochapụ nke akụkụ ahụ), cachexia, sarcopenia na Hormone ma ọ bụ Testosterone Replacement Treatment.
Ụdị SARM a nwere ike ọ bụghị naanị na-ejigide ụda ozu ma kamakwa iweli ya elu. Ostarine na-echekarị na ọ bụ S1 ma S1 ka e kere n'oge gara aga, ọ naghịzi esiwanyewanye.
8.Dosage Of Ostarine (MK-2866) Ntụ ntụ ntụ
MK 2866 bụ SARM na-ekwu okwu ọnụ. Maka ebumnuche nke nchebe anụ ahụ mgbe ị na-ala n'iyi, ihe kachasị nke 15mg kwa ụbọchị na-ewerekarị. Maka ibuwanye, ọtụtụ ndị ọrụ ga-ahụ 20-25mg kwa ụbọchị iji bụrụ ebe dị mma ịmalite. Ụfọdụ ndị dị elu karị nwere ike ịchọta 30mg kwa ụbọchị ka ha dị mkpa, ma ọtụtụ data na-egosi nkwụsị dị otú ahụ na-emekarị obere ihe ma e jiri ya tụnyere oghere 20-25mg n'ọtụtụ mmadụ.
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu ga-eji izu 6-8 mezuo izu 4 n'enweghị usoro SARM mgbe ọ bụla okirikiri nke Ostarine zuru oke. Ọ bụ ezie na testosterone suppression nwere ike ọ gaghị abụ arọ, PCT nwere ike maọbụ ọ gaghị adị mkpa. Otú ọ dị, mmetụ ụfọdụ ga-adị, ọ ga-akacha mma inye ahụ ahụ ohere ịhazi. MK 2866 na-eburu ọkara ndụ nke ihe dị ka 24 awa; otu ugboro kwa ụbọchị ịzụta ọgwụ zuru ezu. Enweghị uru ọ bụla maka ọtụtụ doses kwa ụbọchị.
LGD-4033, bụ nke a maara dị ka Anabolicum bụ Onye Na-emepụta Androgen Receptor Modulator (SARM) nke na-agbanwe agbanwe bụ nke dịka testosterone bụ nke anabolic ma na-enweghị mmetụta ndị gosipụtara n'èzí azụ anụ ahụ. Ligand Pharmaceuticals, ligand, na-ezo aka na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ molecules, mepụtara LGD-4033. Ligand Pharmaceuticals emeela onwe ya aha na SARM na GTx, ha abụọ na-anọchite anya ọtụtụ ihe e kere eke SARM n'ime afọ iri gara aga.
LGD-4033 bụ otu n'ime SARMS ọhụrụ nke pụta. Ọ bụ SARM na-abụghị nke steroid nke na-ejikọta ya na AR nke na-emepụta steroid-dị ka nsonaazụ mebiri steroid. Ọ bụ SARM kachasị mma nke nwere ike ịtụgharị aka na anabolic n'ihe banyere ike. LGD-4033 bụ ike kachasị SARMS niile gbasara nha nke ị ga - enweta.
Ọ bụ na otu ìgwè etrogen receptor (AR) nke bụ anụ ahụ na-ahọrọ, kere iji gwọọ ahụ ike na-ejikọta ya na nnukwu ọrịa na-adịghị ala ala, ọkpụkpụ ahụ ike na afọ na ọrịa cancer. A na-atụ anya LGD-4033 iji nweta ọgwụgwọ ahụ uru nke testosterone na nchekwa dị mma, ikwere na ndidi na-anabata ya site na anụ ahụ-usoro ntinye nhọrọ na ụdị okwu nke ịhazi.
LGD-4033 bụ onye na-ahọrọ androgen receptor modulator (SARMS), na ederede SARM nke na-abụghị steroidal nke na-ejikọta AR na ebigbọ dị elu (Ki nke ~ 1 nM) na selectivity. Ọ bụ na klas nke androgen receptor (AR) ligands nke bụ anụ ahụ na-ahọpụta, mepụtara iji na-agwọ ọrịa mgbu nke metụtara ọrịa cancer, nnukwu ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ bụ ụkọ akwara afọ. A na-atụ anya na LGD-4033 ga-emepụta uru ọgwụgwọ nke testosterone na nchebe dị mma, nnwere onwe na ndidi nabatara n'ihi anụ ahụ-usoro nhọrọ nke ime ihe na usoro ụzọ nke nlekọta.
10.Dosage nke LGD-4033 (Ligandrol)
Anabolicum (LGD-4033) na-ebute ọkara ndụ nke ihe dị ka 30 awa ma kachasị mma otu ugboro kwa ụbọchị. 10mg kwa ụbọchị bụ ọgwụ kachasị ọnụ na ụfọdụ na-aga dị ka 20mg kwa ụbọchị n'enweghị nsogbu ọ bụla. A na-ejikarị SARM ndị ọzọ tụnyere Anabolicum dị ka Ostarine (MK 2866) ma ọ bụ Cardarine (GW-50156).
GW-501516, nke a maara nke ọma dị ka Cardarine, bụ ọgwụ na-ahụkebe dị iche iche dịka onye agonist receptacle PPAR (PPAR-RA). Nnyocha maka ọgwụ a malitere na 1992 na mgbakwunye mgbalị n'etiti GlaxoSmithKline (GSK) na Ligand Pharmaceuticals. A debere nnyocha n'ime ngwaahịa a iji gbasaa ọgwụgwọ maka ọrịa dịgasị iche iche nke ọrịa obi, yana ọrịa shuga, oke ibu na ọnọdụ ndị ọzọ.
N'oge na-adịghị anya, ọ chọpụtara na PPAR-RA dị nnọọ irè n'ịkwalite ntachi obi, ma egosipụtakwa na ọ ga-efu nnukwu ego. Achọpụtara na Cardarine mụbaara ohere nke ọrịa kansa nke ọma, ya mere, GSK kwụsịrị nyocha ọ bụla ọzọ. Otú ọ dị, nchọpụta ndị mepụtara ihe ọjọọ na-eji dosinine Cardinine bụ 500 ruo ọbụna 1000 ugboro ole mmadụ ga - ewere. Ọ bụrụ na ọrịa cancer bụ ihe ize ndụ na-edoghị edozi.
Cardarine (GW-501516) bụ ọgwụ na-ejikọta na onye na-anabata PPAR. Ọ bụ Glaxo Smith Kline na Ligand Pharmaceuticals na 1992 kere ya. A chọpụtara na Cardarine, mgbe ọ na - ejide ya na onye na - anabata PPAR, na - achọpụta ihe a na - akpọ nkuzi PGC - 1a, nke ahụ na - eme ka mkpụrụ ndụ gụnyekwuo ike. E gosipụtara Rats na Cardarine ka ha nwekwuo mmetụ acid metabolism ma nwekwuo nchedo oke ibu site na iri nri na-ezighi ezi, yana nchebe dị ukwuu site na ụdị ọrịa-2. N'ọmụmụ ihe ọzọ banyere enwere Rhesus, e gosipụtara cardarine iji mụbaa HDL (ezigbo cholesterol) ma belata LDL (cholesterol ọjọọ).
Ebumnuche nke mmetụta a pụtara na a ga-eme ka onye na-ebugharị cholesterol mụbaa ABCA1. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, cardarine na-eme ka otu mkpụrụ ndụ ihe nketa dị na mmega ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-amụ cardarine iji mee ihe n'ịgwọ ọrịa ọrịa cardio tupu e mechie ya na 2007.
12.Dosage Nke GW 501516 (Cardarine)
GW-501516 na-ekwu okwu ọnụ. Ihe ntanye kachasị maka PPAR-RA bụ 10-15mg kwa ụbọchị maka izu 8. Otú ọ dị, ụfọdụ akụkọ na-ekwu na a ghaghị iji ọgwụ maka 12 mee ihe maka nsonaazụ dị mma, na ọtụtụ ndị mmadụ na-anabata 20mg kwa ụbọchị.
dabara na ntachi obi na ịbachasị abụba na 10-15mgs kwa ụbọchị maka ihe mgbaru ọsọ 8 zuru ezu; Otú ọ dị, 20mg kwa ụbọchị maka izu 8-12 bụ ntinye a tụrụ aro iji mee ka ị nweta nsonaazụ kachasị mma na na mgbatị ahụ. Cardarine bụ ihe a machibidoro iwu na ụfọdụ egwuregwu, ya mere a na-atụ aro ka ị kpachara anya na ojiji ya ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ AASraw gị: www.aasraw.com. Meezie dị ka n'okpuru ebe a n'otu n'otu:
Ị ga-enweta akwa sarm raw ntụ ntụ na ịdị ọcha 98% min na nso nso!
Tags: Ọla abụba
Kedu ihe kachasị na-eme ka ịṅụ ọgwụ ike na otú ha si arụ ọrụ?
Ọ ka mma ka usoro ọgwụgwọ Post (PCT) dị mgbe ị na-ewere steroid Ebee ka ịzụta Trenbolone Acetate ntụ ntụ?